के गरेको भन्दा बढी रोमान्टिक प्रेम मा गिरने को शहर मा. लगभग हरेक केटी जान्छ कि विदेश अध्ययन सपना बारे प्रेम मा गिरने पेरिस, पनि म माध्यम गए भन्ने चरण । तर पहिले तपाईं बाहिर उद्यम मा डेटिङ को दुनिया फ्रान्सेली मानिसहरू त्यहाँ एक जोडी कुराहरू तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ. म पहिले जारी, मिति एक फ्रान्सेली मान्छे समयमा मेरो समय विदेश, तर केही मेरो मित्र र मान्छे मा मेरो कार्यक्रम गरे । म पनि अध्ययन फ्रान्सेली डेटिंग भन्सार पूर्व विदेश जा, किन । थियो किनभने म कल्पना को बैठक एक फ्रान्सेली मान्छे । एक हेरिरहेका पछि धेरै लुइस चलचित्रमा फ्रान्सेली मान्छे, यो स्वीकार. किन अर्को कारण मैले अध्ययन गर्न थाले, उनलाई थियो, त्यसैले म जोगिन सक्छ बनाउन एक बेवकूफ गल्ती र गल्ति दिनेछु एक मान्छे को गलत विचार हो । हाँ, डेटिङ फ्रान्स मा छ एकदम फरक डेटिङ मा अमेरिका र म निश्चित छु तपाईं को गर्नेहरूका छ कि दिनांक एक फ्रान्सेली मान्छे सहमत सक्छन्. संयुक्त राज्य अमेरिका मा डेटिङ देखेको छैन रूपमा एक विशाल सम्झौता र छलफल भएको छ प्रकारको जस्तै एक ‘परीक्षण सम्बन्ध छ । व्यक्ति त्यहाँ साँच्चै केहि छैन भनेर रोक्न गर्न तपाईं बस मा कदम गर्न अर्को मान्छे । स्नेह जस्ता चुंबन, वा पूर्ण सामान्य छ र छलफल छैन एक ठूलो सम्झौता छ । किन कारण डेटिङ बराबर छैन सही चमेरो बन्द छ जब किनभने एक मिति, तिनीहरूले छौं, प्राप्त गर्न प्रयास गर्न थाह अन्य व्यक्ति राम्रो छ । जस्तै मा एक साथी छ । फरक छ । सबै को पहिलो डेटिङ, धेरै मान्छे एक कुरा छैन । यो पनि साधारण छ, दुई मान्छे एक्लै बाहिर जान फ्रान्स मा. पनि एक सरल कफी रूपमा व्याख्यायित सकिन्छ केहि अधिक गम्भीर छ । हो, भने एक मान्छे सोध्छन् तपाईं को लागि बाहिर कफी संभावना छ कि एउटा ‘ठूलो सम्झौता’ प्रकार को मिति तिनीहरूलाई लागि. फ्रान्सेली विचार अनौपचारिक मिति यस्तो कफी वा भोजन एक धेरै अधिक गम्भीर अमेरिका भन्दा. म पहिले उल्लेख, अमेरिकी शैली को डेटिङ चुंबन वा पूर्ण स्वीकार्य छ र सामान्य छ । यो पक्कै पनि छैन यो मामला मा फ्रान्स । रूपमा चाँडै तपाईं चुम्बन कसैले, उहाँले ग्रहण गर्नेछन् भन्ने कुरा गम्भीर छन् र तपाईं अनन्य हो. फ्रान्सेली छैन ‘गरौं बन्न अनन्य’ कुरा, तिनीहरूले बस चलाउन कुराहरू छन्. भने भइरहेको कि, सावधान हुन को जो तपाईं चुम्बन । एक चुम्बनले नेतृत्व गर्न सक्छन् को एक पुरा धेरै नाटक भने तपाईं चुम्बन गलत मान्छे । म सम्झना थियो कि मामला लागि एक मित्र को मेरो । त्यो चुम्बन फ्रान्सेली मान्छे त्यो थियो क्रशिंग मा त्यो थियो जब मातेको छैन । म कसम खान्छु मात्र मिनेट गए गरेर अघि केटा सुरु सबैलाई बताउन छ कि मेरो मित्र थियो, ‘आफ्नो जीवनको प्रेम. ‘कि पछि रात उहाँले लाग्यो कि तिनीहरूले थिए आधिकारिक एक जोडी थियो जो पक्कै पनि मामला छैन र उहाँलाई रही रोक्न पछि लाग्दा उनको थियो एकदम कार्य हो । भने स्नेह गर्न, नभएसम्म तपाईं हुन योजना मा एक सम्बन्ध छ । यहाँ अर्को कुरा, फ्रान्सेली पहिले देखि नै एक स्टीरियोटाइप कि अमेरिकी बालिका हो सजिलो त छैन साबित स्टीरियोटाइप सही । बस छन् जस्तै मान्छे देख माथि हुक गर्न अमेरिकामा छन्, फ्रान्सेली मान्छे देख गर्न छ एक रात खडा पनि । लागि फ्रान्सेली खेलाडी र आफ्नो. यो सामान्यतया हुनेछ जस्तै फ्रान्सेली मान्छे र अमेरिकी बालिका । यो राम्रो स्पष्ट के मान्छे मनसाय थिए न्याय गरेर आफ्नो शरीर भाषा छ । बालिका थिए तिनीहरूलाई मा र तिनीहरूले थिएनन्. सेवा बालिका अधिक र अधिक रक्सी, पिउन लगभग धेरै छ । जबकि म ठ्याक्कै थाहा छैन के भयो पछि, यो धेरै स्पष्ट थियो कि तिनीहरूले थिए तिनीहरूलाई रही मादक पदार्थ सेवन उद्देश्य मा छ । यो पक्कै पनि छैन एउटा सजिलो कार्य हुन तर तपाईं पाउन भने आफैलाई मा एक चिपचिप अवस्था संग एक फ्रान्सेली मान्छे, त तपाईं निर्माण गर्न माथि साहस बारेमा तिनीहरूलाई बताउन सांस्कृतिक मतभेद यो डेटिङ गर्न आउँदा. यो कुरा व्याख्यायित सकिन्थ्यो गलत बाटो र सक्ने पनि तर्साउनु मान्छे, दूर तर हुनुहुन्छ भने असजिलो त यो हो कि केहि गर्नै पर्छ । हुन प्रयास कोमल र शान्त जब ल्याउने विषय माथि छ । उहाँलाई बताउन भनेर कुराहरू छन् बढ पनि छिटो र तपाईं हुनुहुन्न तयार गर्न अनन्य छ । कसरी व्याख्या हुनेछ तपाईं प्राप्त गर्न रुचि थाह पहिले उहाँलाई कुराहरू भएको अनन्य छ जो पूरा गर्न विपरीत उहाँले के गर्न प्रयोग छौँ. फ्रान्सेली प्राप्त गर्न थाहा छ आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य एक पटक कुराहरू अनन्य हो. पनि, एक अमेरिकी रूपमा छैन अनादर गर्ने हुन, आफ्नो संस्कृति छ । तपाईं सामान्यतया आनन्द भइरहेको मायालु छौं जब मा डेटिङ चरण, रोक्नु. हुन सजग सांस्कृतिक मतभेद र तिनीहरूलाई आदर छ । यो एक दुई-तरिका सडक छ यहाँ । उहाँले बुझ्न आवश्यक छ कि छैन छौं तयार गर्न अनन्य हुन, र तपाईं बुझ्न आवश्यक छ भनेर चुंबन एक काम छ कि एक अनन्य दम्पतीले गर्छ । म सम्झना गर्न पूर्व जाँदै फ्रान्स म कुरा थियो एक फ्रान्सेली मान्छे । सम्म एक दिन उहाँले मलाई पक्रेको गार्ड बन्द छ । उहाँले सुरु बताइरहेका रूपमा मलाई ‘मेरो प्रेम’ पहिले पनि हामी भेट मा व्यक्ति. म छु छैन एक शान्त राख्न त म उहाँलाई दिनुभयो, सांस्कृतिक मतभेद कुरा. उहाँले थिएन पनि यो बारेमा खुसी र सुरु मलाई लिन ‘बढी जोखिम छ । ‘उहाँले पनि मलाई भन्नुभयो खोल्न मेरो हृदय र कसरी म चिसो थियो जो थिएन बस्न पनि राम्रो संग मलाई डोऱ्याउँछ जो, यो अर्को विषय छ, अस्वीकार छ । सम्बन्ध मा म थियो रूपमा काम गर्न भने, म थियो र ‘ब्रेक अप’ को मान्छे । मलाई इमानदार हुन र तपाईं बताउन सजिलो थिएन. कहिलेकाहीं बेवास्ता मान्छे बस यो कटौती गर्दैन. जब एक फ्रान्सेली मान्छे प्रेम छ, कहिलेकाहीं उहाँले बन्न सक्छ एकदम. बेवास्ता उहाँलाई लागि सप्ताह को एक जोडी र त्यसपछि एक पटक म मा थियो फ्रान्स, उहाँले थाले सन्देश मलाई अनियन्त्रित भनेर इंगित गर्न, म मिल्यो बाहिर र अवरुद्ध उहाँलाई । अवरोध पर्याप्त थिएन तापनि, उहाँले थाले सन्देश मलाई.
म थियो ब्लक गर्न आफ्नो मित्र पनि र पछि एक जोडी को महिना, उहाँले अन्तमा रोकियो प्रयास गर्न मलाई सम्पर्क गर्नुहोस् । मलाई थाहा मा एक केटी, मेरो एक्सचेन्ज कार्यक्रम पनि थियो एकदम धेरै को समस्या माथि तोडने संग उनको फ्रान्सेली प्रेमी छ । त्यो उहाँलाई दिनुभयो, ‘ब्रेक अप’ कुरा पटक पहिले उहाँले अन्तमा बुझे कुराहरू थिए. गरेको बस रोक्न देखेर उहाँलाई सबै सँगै । यो जस्तै देखिन्छ भइरहेको मित्र संग आफ्नो पूर्व गर्दा उहाँले साँच्चै प्रेम छैन एक विकल्प हुन यहाँ । सबै भन्दा राम्रो सल्लाह लागि यो विभाग भने, उहाँले साँच्चै समझ छैन त यो तपाईंको समय.
अर्को टिप हुनेछ, बस उहाँलाई बेवास्ता
बेवास्ता पाठ सन्देश, कल, र शायद यो पनि ब्लक उहाँलाई. जे कटौती गर्न बन्द संचार त्यसैले दुवै तपाईं र उहाँलाई मा उत्प्रेरित गर्न सक्छ. जस्तै म महसुस भएको छु दिने सल्लाह को एक धेरै सम्बन्धीका खराब कुराहरू बारे फ्रान्सेली पुरुष, तर तिनीहरूले हुनुहुन्न खराब मान्छे मा सबै. मेरो पुरुष फ्रान्सेली मित्र त फ्रान्सेली पुरुष, तर तपाईं को आवश्यकता बुझ्न सांस्कृतिक मतभेद पहिले तपाईं चाहनुहुन्छ भने निर्णय गर्न मिति एक फ्रान्सेली मान्छे । तपाईं के भने निर्णय गर्न मिति एक फ्रान्सेली मान्छे, त्यसपछि सुन्न आशा मा प्रारम्भिक मा सम्बन्ध छ । स्टीरियोटाइप कि फ्रान्सेली पुरुष बढी रोमान्टिक हुन लाग्न साँचो त तयार को एक धेरै को लागि. पछि तपाईं प्राप्त विगतमा सांस्कृतिक मतभेद त्यसपछि सम्बन्ध हुनुपर्छ धेरै सहज र रमाइलो छ । लागि सजिलो मान्छे पूरा गर्न अन्य मान्छे मा पेरिस किनभने सबै समलिङ्गी बारहरू. जहाँसम्म बालिका लागि, यो देखिन्छ जस्तै यो मुश्किल पूरा गर्न अन्य बालिका । म कुरा सम्झना गर्न एक अमेरिकी केटी एक पार्टी मा यस बारेमा विषय हो । उनले भने, कि त्यो थिएन थियो, कुनै पनि किस्मत को समयमा उनको. समलिङ्गी बारहरू ज्यादातर भरिएको समलिङ्गी पुरुष र त्यहाँ थिएनन् पनि धेरै ठाउँमा छ । त्यो पनि टिप्पणी मा कसरी फ्रान्सेली महिला धेरै कठिन प्राप्त गर्न थाह छ । म इच्छा म मदत गर्न सक्छ तपाईं यस बारे अधिक तर दुर्भाग्यवश, यस बारे थप जानकारी. बारेमा ज्ञान समलिङ्गी डेटिङ मा फ्रान्स, त्यसपछि छोड्न कृपया आफ्नो सल्लाह तल टिप्पणी मा. प्रेम मा गिरने पेरिस मा कुनै सजिलो काम छ तर आशा गरौं यस ब्लग पोस्ट बनाउन हुनेछ, कुराहरू तपाईं को लागि धेरै सजिलो छ । रूपमा लामो तपाईं छौं सजग विभिन्न डेटिङ भन्सार र राम्रो मनसाय छ, त्यसपछि कुराहरू जाने गर्नुपर्छ, तपाईं को लागि ठूलो छ । तपाईं थाह कहिल्यै, तपाईं पाउन सक्छ आफ्नो फ्रान्सेली प्रेम गर्दा तपाईं विदेश जाने । वा कम से कम एक धेरै राम्रो मित्र छ ।
← भिडियो च्याट को विश्व
टिप बचत गर्न स्काइप भिडियो →